यो कस्तो चुम्बन भन्दा छरितो हुन सक्ने देखिन्छ हुनेछ? तैपनि, धेरै को लागि यो ठूलो कठिनाइ हुन्छ। विशेष गरी पहिलो पटक। को thrill, उत्तेजना र डर। भावना को एक सम्पूर्ण दायरा। "कसरी टमाटर मा चुम्बन गर्न सिक्न?" यो पुरानो, सिद्ध तरिका हो: त्यो के banal र सरल प्रश्नको धेरै धक्का छ। हुनत यो हास्यास्पद छ।
पहिले कसरी चुम्बन गर्न सिक्दै टमाटर मा, तपाईं ती नै तरकारी किन्न आवश्यक छ। धेरै टुक्रा। पाकेको, नरम, धेरै बाक्लो छैन skinned। किन एक सानो एक? किनभने प्रयोग ढिलाइ हुन सक्छ। छाला हटाउन। सुरू गर्न, रसदार फल को ओठ ट्याप गर्नुहोस्। धेरै पटक। र हाँस्न रोक्न। आफैले पनि यस्तो पेशा पनि हास्यास्पद देखिन्छ। त्यसपछि यो थोपा छैन र आफ्नो औँलामा नरम छैन फुट्छ छैन भनेर टमाटर चुम्बन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो जिब्रो धकेल्नु प्रयास नगर्नुहोस्। यो पछि एक थप उन्नत चुम्बन छ।
सामान्यतया, क्षमता संग चुम्बन जन्म होइन। यो प्रकृति दिएको छैन, एक honed कौशल छ। र यदि छैन हात तपाईं प्रविधी मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई असल व्यक्ति मा, त्यसपछि तल र आउँछन् दुर्भाग्यपूर्ण रातो फल। तपाईं टमाटर मा चुम्बन गर्न सिक्न अघि, सम्झना: चुम्बन चुम्बन कलह। मानव ओठ र मुख एक टमाटर जस्तो गर्छन्। प्राप्त एक कोमल चुम्बन, तपाईं फल puree दबाउन छैन हेरचाह गर्न आवश्यक छ। बस आफ्नो ओठ स्पर्श र दु: ख छैन, चुस्नु छैन। र, को पाठ्यक्रम, आफ्नो जिब्रो पीडा छैन। कि अभ्यास "उत्कृष्ट" मा पारित गरिएको छ बताउँछ? पूर्णांक, हातमा nesmyaty टमाटर। जस्तै तपाईँको प्रयोग को सामने थियो।
दोस्रो चरण - चुम्बन भाषा संग उन्नत। दृश्य प्रत्यक्ष, यो जिम्मेवार छ। त्यसैले, कसरी टमाटर मा सरोष चुम्बन गर्न सिक्न:
फल (छील हटाउन छैन) लिन;
बिस्तारै एक बोक्रा अवशोषित;
दाँत प्रयोग नगर्नुहोस्;
(आफ्नो ओठ लिएर बिना) फल को भाषा संग एक बिट खेल्छन्।
तपाईंले अझै पनि प्रयोग अधिक थियो अलविदा, टमाटर चुम्बन शानदार गर्न सक्नुहुन्छ। एक टमाटर मात्र दाग, बोक्रा थियो र जस्ताको तस्तै रह्यो भने तपाईं राम्रो सामना। यो पहिलो पटक काम गरेन? त्यसैले, यो दोस्रो प्रयास, तेस्रो र अरूको पालो थियो। तपाईं एकल दृष्टिकोण सामना भने आफैलाई प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ - कुनै मानव मुख तपाईं भयभीत छैनन्।
कसरी आफ्नो साझेदार संग चुम्बन गर्न सिक्न? बरु टमाटर मा भन्दा, यो सिक्न। प्रयास गर्नुहोस्, छलफल, फेरि प्रयास गर्नुहोस्। प्रक्रिया ठाउँ लिन कति ध्यान छैन। तपाईं मार्गदर्शन गर्न एक अनुभवी साझेदार गरौं। आफ्नो साझेदार पनि चुंबन को क्षेत्र मा एक साईट छ भने, त्यसपछि तपाईं धेरै भाग्यशाली हो। तपाईं आफ्नो भावना सुन्न, कुनै पनि उपकरण सँगै अन्वेषण गर्न सक्छ।
उमेर 15 जवान मानिसहरू सबैभन्दा लोकप्रिय प्रश्न - "चुम्बन कसरी सिक्न" फ्री सम्भव टमाटर कसरी सिक्न छ, र उपयुक्त साझेदार। तपाईं मिति योजना छन्? तपाईं सिकाउनुभयो गरिनेछ धेरै आशा कसरी चुम्बन गर्न थाहा छैन कि सीधा भन्न सकिन्छ। र तपाईं पक्कै यो सरल तर सुखद प्रक्रिया मास्टर मदत गर्न सक्छ। हरेक संग चुम्बन आफ्नो कौशल बढ्नेछ। प्रविधी ध्यान छैन, केवल महसुस र आवश्यक छ लाग्छ के।
फ्यूज बिना गर्भवती प्राप्त गर्न कसरी छैन। गर्भवती प्राप्त गर्न के गर्न
किन Mistress वा प्रेमी: सम्बन्ध बारे वास्तविक प्रश्न? त्यो सही छ, वा छैन? मान्छे किन परिवर्तन गर्छन्?
महिलाहरु को लागि खतरनाक abstinence: यसको जवाफ
यौन कार्य कसरी लामो छ र मानिसहरू मा अकाल फटना के हो
पंपहरू कसरी सफा गर्ने? धेरै सिद्ध तरिकाहरू
प्रकृति मा आराम। मास्को सस्तो सप्ताह मा मनोरञ्जन केन्द्र
Yaroslav बुद्धिमान् अन्तर्गत पुरातन रूसी राज्य को फूल: इतिहास
शुद्ध पे मा दाँत पिउन र ककटेल मा मिश्रण कसरी गर्ने
अभिनेता: "भौतिक वा रसायन" - रूसी-शैली को एक remake
किन दुख जन्म गर्भपतन मा करङहरु?
भिडियो च्याट को लाभ
किन पेट शिशुहरू मा दुख्यो?
योग के हो?
खीरे Fontanelle। खेती को सुविधाहरू